भविष्यमा पत्रकार र वकिल भन्ने चाहाना छ : अधिकारी – Enayanepal.com
भविष्यमा पत्रकार र वकिल भन्ने चाहाना छ : अधिकारी
हरेक विद्यार्थीका आ— आफनै चाहाना हुन्छन । सबै विद्यार्थीहरुलाई एउटै किसिमको वातावरण मन पदैन । विद्यालयको वातावरण विद्यार्थीको मनोविज्ञान र अभिभावकको आफना सन्तानप्रति दर्शाउने अभिभावकत्व जस्ता विषयमा हामीले विद्यार्थीसँगै केही विद्यार्थी केन्द्रित प्रशनहरु तेस्याउँछौ । केही समय विद्यार्थीसँग बसेर आम विद्यार्थीको प्रतिनिभित्व गर्ने पात्रका बारेमा कुरा गर्ने गर्दछौ । हामीले यसपटक धेरै विद्यार्थीको प्रतिनीधि पात्रका रुपमा एसोएस हर्मनमाइनर विद्यालय कालागाउँ सुर्खेतमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्र गणेश राज अधिकारीलाई भेटाएका छौ । प्रस्तुत छ अधिकारीसँग ईनयाँ नेपालकर्मी.नरजन तामाङ्ले गरेको कुराकानीको संक्षेप :
पढाई राम्रै चल्दै छ । भन्नुपर्छ ।
एसोएस जस्तो विद्यालयमा पढिसकेपछि कस्तो भयो भन्दा पनि मानिस त्यस्तो जाति हो जति भए पनि पुग्दैन । हाम्रो विद्यालयले अरु विद्यालय भन्दा राम्रो गरि राखेको अवस्था छ । मल्टिमिडियाको माध्यमबाट पढाई हुन्छ । स्मार्टबोड जोडिएको छ । अधुनिक प्रविधीहरुबाट पढाई हुन्छ ।
म घरमा पढछु । बिहान बेलुका समय मिलाएरै ३ ÷४ घण्टा पढछु ।
 अहिले एसोएस हर्मनमाइनर विद्यालयको जुन वातारण छ यो वातारण पढाईको लागि कस्तो लाग्छ नि ?
यो भनौ भने पढाईको लागि ज्यादै नै उपयुक्त छ । तर कहिले काँही अस्पतालको दुर्गन्ध आउछ । जुन बाहिरी होहल्लाबाट मुक्त,छ । यताउता वातावरण हेर्ने हो भने सुन्दर छ ।
मलाई सामाजिक विषयका सर गंगारामले खडकाले पढाएको बुझछु । उहाँले पढाएको सार्थक पनि हुन्छ राम्रो पनि हुन्छ । मल्टिमिडियाको पनि प्रयोग गरिराखनु हुन्छ । बेलाबेलामा सूचनामुलक सन्देश मुलक भिडियोहरु देखाउनु हुन्छ । विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गर्नुहुन्छ । हामीले जे सोध्यो भने पनि उत्तर आउछ । अरु शिक्षकलाई केही आउदैन । उहाँहरु शिक्षक भन्दा फरक खाल्को हुनुहुन्छ । कोही शिक्षकहरुसँग आइडिया माग्न जादा गंगाराम सरसँग जाउ धेरै आइडिया दिनुहुन्छ भन्ने गर्नुहुन्छ । त्यसले पनि प्रष्ट हुन्छ ।
म पढेर भविष्यमा पत्रकार र वकिल भन्ने चाहाना हो मैले समाजमा भएका घटनाहरुको सत्यताको वकालत गर्ने समाजमा मैले देखेको छु । र भोगेको छु । त्यसको सत्यताको वकालत गर्ने मेरो इच्छा छ ।
मेरो कक्षामा ४६ जना विद्यार्थीहरु छन । जुन पढाउने कुरामा पढाएको बुझछु । म खुल्म खुल्ला भनिदिन्छु । पछाडी बसे पनि अगाडि बसे पनि बुझछु ।
पढिरहेको बेला हल्ला गरेमा साच्चै भन्दा नराम्रो महसुुस हुन्छ । यदि कसैलाई कक्षामा पढन मन छैन भने पनि बाहिर गएर पढेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । रिस उठेर आउछ । खासै सार्थीहरुले डिर्सटब गदैनन ।
हाम्रो विद्यालयमा भनौ भने खासै नराम्रो पक्ष त केही छैन । तर शिक्षकहरुसँग गुनासो छ । विद्यार्थीहरुलाई फोकर्स नगरे पढाउने बानी सबै विद्यार्थीहरुलाई नसमेटने व्यवहार छ । कुनै शिक्षकहरुले को विद्यार्थीले के गरेको छ । भनि सबै हेर्नु हुन्छ भने कोही शिक्षकहरु आएर क्याम्पस जस्तो आएर लेखचर दिएर जानु हुन्छ । यो बानी नगरिदिन आग्रह गर्छु ।
 तपाईका विद्यालयको राम्रा पक्षहरु के(के हुन ?
राम्रो पक्षहरु विद्यार्थीहरुलाई हरेक क्षेत्रबाट म फुटबलमा क्र्रिकेटमा जान्ने छैन तर पनि रुचि राख्छु भने मैले रुचि राख्न पाए म के गर्ने सक्छु । म बोल्न सकुला भन्न सकुला बादविबाद गर्न सकुला विद्यालय प्रति धन्य छु । विद्यालयले हरेक विद्यार्थीहरुलाई उनीहरमा भएका सीपको मुल्याङ्गन गरि समेटेर अक्तिरिकत क्रियाकलापमा भाग लिने वातावरण सृजना गर्दछ । शिक्षकहरुको पढाउने शैली राम्रो छ । हरेक कुरामा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु हुन्छ । मैले नकारात्मक सोच्यो भने नकारात्मक हुन्छ । सकारात्मक सोच्यो भने राम्रै हुन्छ । विद्यार्थीहरुलाई सासती पर्ने खासै काम विद्यालयले गरेको छैन ।